पोल्याण्डबाट युकेमा कार आयात गर्दै | मेरो कार आयात
के तपाईं युनाइटेड किंगडममा आफ्नो पोलिस गाडी आयात गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ?
हाम्रो उद्धरणहरू पूर्ण समावेशी छन् र तपाईंको आवश्यकतामा पूर्ण रूपमा आधारित छन्। तपाई यस पृष्ठमा तपाईको गाडीको आयात प्रक्रिया बारे बढी जानकारी लिन सक्नुहुनेछ, तर स्टाफको सदस्यको साथ सम्पर्कमा बस्न र बोल्न हिचकिचाउनुहोस्।
पोल्याण्डबाट बेलायतमा कार आयात गर्दा तपाईं पूरै कर मुक्त गर्न सक्नुहुनेछ जुन सवारी vehicle महिना भन्दा पुरानो हो र नयाँबाट 6००० किलोमिटर कभर छ।
फ्रान्सका बायाँ ह्यान्ड ड्राइभ कारहरूलाई केही परिमार्जनहरू आवाश्यक पर्दछ, हेडलाइट बान्कीमा ती गाडीहरू अगाडि आउने ट्राफिकको उज्यालोपनाबाट जोगिन, स्पीडो प्रति घण्टा पठनको लागि माईल प्रदर्शन गर्न र रियर फोग लाइट यदि यो पहिले नै सर्वव्यापी रूपमा अनुरूप छैन भने।
१० बर्ष भन्दा पुरानो कार र क्लासिकहरू अनुमोदन छुट प्रकारको हो, तर अझै एक MOT परीक्षण र रेजिष्ट्रेसन अघि केही संशोधनहरूको आवश्यक छ। परिमार्जन उमेरमा निर्भर गर्दछ तर सामान्यतया हेडलाइटहरू र रियर फोग प्रकाशमा हुन्छ।
हामी पूर्ण आयात सेवा प्रस्ताव गर्दछौं
हाम्रो परिसरमा पूर्ण बीमा यातायात।
तपाईंको कार यूके रोड दर्ता गर्नका लागि आवश्यक छ।
प्लेटहरू आइपुगेका छन्, तपाईको सबै सहयोगका लागि धेरै धन्यवाद, यो तपाईको कम्पनीसँग काम गर्ने खुसीको कुरा हो र मलाई यो शब्द फैलाउनमा कुनै समस्या हुँदैन।
केवल एक द्रुत नोट ठूलो भन्नु छ धन्यवाद र टीमको बाँकी सबै। म कारको बारेमा चिन्तित छु, मलाई लाग्छ कि तपाईंलाई त्यो थाहा थियो !! आज भन्नु पर्न कि यो IVA परीक्षण मार्फत थियो केवल राम्रो समाचार थियो। फेरी धन्यबाद, तपाईले ठूलो काम गर्नु भएको छ र म उत्सव विश्राम पछि बोल्छु र तपाई सबैलाई भेट्न उत्सुक छु। क्रिसमस र नयाँ सालको शुभकामना!